I-Motor Shaft, i-Ball Bearing, izikhonkwane ze-Excavator-Dena
Ipeyinti eyomileyo yase China, uphawu lwenkulungwane entsha.
Umgangatho ophezulu wokugqibela weQela leDrive ngaphakathi kweGear Ring P ...
I-China Supplier EC380 yeePlanethi zeeGiya eziCwangcisiweyo
Ihowuliseyili EC360 UKUHAMBA DEVICE Swing Ring Gear P ...
Elungiselelweyo Precision High EC290 OEM Gear Group ...
Indlela ukugcina care excavator sle ...
22 Epreli, 20
Indlela ukugcina care excavator inxalenye? Icandelo le-excavator swing equka iimoto, isinciphisi, izixhobo zeringi, indawo yokujikeleza ejikelezayo, njl njl.
Uyinceda njani i-excavator ukonga ipetroli
Indlela ukunceda excavator ukugcina amafutha? Abanini abaninzi kufanele ukuba bakhathazeke "Zithini iingcebiso ngokusebenza kwesikhuphi ukunceda ukonga ipetroli?" Kuba amafutha, t ...
Ukulungiswa kwezona mpazamo zixhaphakileyo ...
Ukulungiswa kwezona mpazamo zixhaphakileyo zabembi! / Umatshini wokumba akakwazi ukuqala, qala uzame ukuzilungisa ngokwakho okanye ucele uncedo ngqo? / Yenza oku, ususe iindleko zokulungisa ezingeyomfuneko ...
Indlela yokwenza excavator ukonga ioli?
Abanini abaninzi kufanele ukuba bakhathazeke "Zithini iingcebiso ngokusebenza kwesikhuphi ukunceda ukonga ipetroli?" Ngenxa yokuba ipetroli isetyenzisiwe, iindleko ziya kunyuka ngokufanelekileyo, ...
Unomdla kwiimveliso zethu?
Ezona mveliso ziphambili zii-bushings zebhakethi, izikhonkwane zebhakethi, iigiya zokwenza ujingi / indawo yokuhamba, i-esile ye-planetary carrier, iiaringi zeringi, imingxunya, iimeko, iibhokisi zegiya kunye neebheringi zeringi.
Kufuneka sizabalazele ukusinda kunye nophuhliso.
Inkampani yethu yasekwa ngo-1999, umzi-mveliso ugubungela ummandla omalunga neemitha ezili-15,000. Ukusukela oko yasekwayo, inkampani ibiphucula kwaye ikhula. Inemigca emininzi yokuvelisa phambili, inani leenjineli eziphezulu, abaphathi bobuchwephesha bobuchwephesha. Ngaphandle koko, kukho inkqubo yolawulo lomgangatho ovakalayo.
Idilesi: Hayi. 1, Xingye East Road, Changtai Street, Licheng District, Quanzhou City, kwiPhondo Fujian, China.